Shina flange bolt mpanamboatra sy mpamatsy | Jiuhe
Ny tanjaka avo
Hexagona mafana vao mafana ...
Ny FlIN DIN6921 Flange Bolt dia manana ny fiasa amin'ny fijanonana fihodinana, izay azo alaina amin'ny sombin'ny faritra mifampitohy izay mitaky faritra fisaka na malefaka. Plus, ny DIN6921 Flange Bolt dia tonga lafatra amin'ny fototra mivaingana ametrahana azy, ary ampiasaina hanamboarana ny fitoeran'ireo milina sy fitaovana. Noho ny habeny mety sy volavola mety, dia azo apetraka na aiza na aiza mba hanampiana ny famoahana ny toerana voafetra. Ny endrika miendrika endrika sy tsara tarehy.
* Mampiavaka ny vokatra
*Mombamomba ny vokatra
Ny FlIN DIN6921 Flange Bolt dia misy fizahana efa mandroso, izay manana fiainana ela kokoa ho an'ny fampiasana ary tsy misy ilàna azy ilaina. Ankoatr'izany, dia mahatsapa ny fiasa hamorona lavaka fantsom-bary somary fisarahana eo amin'ny sakamalaho an'ny bolt. Noho ny haino aman-jery tsara sy azo itokisana, dia afaka manatsara tsara ny toerana iraisana amin'ireo sika mifamatotra izy ireo, ka izany no ahafahana manohitra ny fikorontanana sy ny fikosehana amin'ny lalana miolikolika. Raha ampitahaina amin'ny vokatra mahazatra eny an-tsena, dia apetraka amin'ny fametrahana sy fanamafisana, izay mety ho zavatra mety ampiasaina amin'ny indostrian'ny hazavana, ny zavamaneno ary ny metatra tsy misy vesatra. Misy karazany karazana safidy habeny, ka manome mofomamy betsaka kokoa ahafahana manome izany filàna izany.
toerana niaviany Hebei, Shina (Tanibe)
ara-nofo vy vy ambany, vy karbonina avo
Malagasy DIN, BS, ASME, NON-STANDARD
karazana modely henan-doha hexagon, hexagon bouter, rochnn-crout, nylon nony
ny fikarakaran-tany ny tena eo amboniny, ny zated plated, ny black oxide, mafana dip galvanized
loko mavo, manga sy fotsy, volafotsy, mainty, lokon'ny tena
lanja sy refy araka ny (PRODUCT DESCRIPTION)
baiko min 1 sombin-javatra
santionany manolotra santionany maimaimpoana izahay
Previous: Bolt Anti-halatra mangatsiaka be
Manaraka: Ny tanjaka avo
Bolt Anti-halatra mangatsiaka be
Pot-hevagonal mikotroka mafana be
ADDRESSFaritra indostrialy Dongmingyang, Distrika Yongnian, tanàna Handan, Faritanin'i Hebei
TRANO FISORANA08:30 ~ 17:30 Moday hatramin'ny Sabotsy